လေးဖြူ တကယ်ပြန်လာပြီ.. | ရွှေမင်းသား
ရွှေမင်းသား မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်...
Home » သတင်း , သီချင်း » လေးဖြူ တကယ်ပြန်လာပြီ..
ခံစား ရေးသားသူ... ရွှေမင်းသား @ Thursday, January 15, 2009
Alpine သောက်ရေသန့် နဲ့Iron Cross music entertainment တို
့ပူးပေါင်းစီစဉ်တဲ့ Alpine music Tour 2009 အစီအစဉ် စာနယ်ဇင်း
မိတ်ဆက်ပွဲကို ဇန်န၀ါရီလ (၁၂)ရက်နေ့ညနေ (၆)နာရီအချိန်က Traders Hotel
မှာကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
Alpine music Tour 2009 ကို ရန်ကုန် ၊မန္တလေး ၊ ဘားအံ ၊လားရှိုး ၊မူဆယ်
၊တောင်ကြီး ၊မိထ္ထီလာ ၊မော်လမြိုင် ၊ ဖားကန့် ၊ထားဝယ် ၊ စစ်တွေ ၊ပုသိမ်
၊မကွေး ၊ မြင်းခြံ ၊မိုးကုတ် စတဲ့မြို့ ကြီးများမှာ ဖျော်ဖြေ
သွားမှာဖြစ်ကြောင်း Alpine music Tour 2009 ရဲ့ပထမဆုံး ခရီးစဉ် အဖြစ်
ဇန်န၀ါရီလ၂၄ , ၂၅ ရက်များမှာ မန္တလေးမြို့ Sedona Hotel ၌ ကျင်းပမှာ
ဖြစ်ကြောင်း ၊ဒုတိယ ခရီးစဉ်အဖြစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃၀, ၃၁ ရက်နေ့ များမှာ
မျှော်စင်ကျွန်း၌ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Alpine music Tour 2009 မှာ Iron Cross ဖျော်ဖြေပွဲများနဲ့သုံးနှစ်တာ
ကာလလောက် အဆက်ပြတ်နေတဲ့အဆိုတော် လေးဖြူပါဝင်သီဆို မှာဖြစ်ကြောင်း
၊လေးဖြူအနေ နဲ့ ယခင် ကတည်းက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို လှည့်လည်
ဖျော်ဖြေရန် ဆန္ဒရှိပေမယ့် ယခုမှ အကောင်အထည် ဖော်ဖြစ်ကြောင်း Alpine music
Tour ခရီးစဉ်နှင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ဖေဖော်ဝါရီလလောက် အထိသာ လေးဖြူ
ပါဝင်သီဆိုမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Labels: သတင်း, သီချင်း
1 ခုလောက် ဝေဖန်ကြည့်ရအောင်:
February 14, 2009 at 11:46 PM
Alpine ကတော.ဒီပွဲမှာ တော်တော်ကြီး လုပ်စားပါတယ် ရေ ၁ ခွက်ကို ၂၅၀ိ ပေးရပါတယ်။
Online ပေါ်တွင် ကြော်ငြာများကို ကလစ်နှိပ်၍ ငွေ ရှာ ရန်အတွက် ပုံတွင် ကလစ်နှိပ်၍ မင်ဘာဝင်နိုင်ပါပြီ..
ခေမာရွှေပြည်, ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း), Myanmar (Burma)
ရွှေမင်းသား...။ထင်ပေါ်တဲ့အနုပညာရှင်မဟုတ်..ဇာတ်သမားလည်းမဟုတ်...ရွှေပြည်ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးလို့ ရွှေပြည်ကြီးအတွက် ခံစားမှုများစွာနဲ့ အသုံးတော်ခံမယ့် စာသားတွေနဲ့ ရာဇဝင်အဆက်ဆက်က မင်းတွေရဲ့... သားတစ်ယောက်အဖြစ် တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုနိုင်ကောင်းပါရဲ့လို့...မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ပေါ့......
၀တ္ထု (7) News (2) ကဗျာ (31) ကာတွန်း (2) ကိုရီးယား အလုပ်အကိုင် (20) ကိုရီးယားလမ်းညွှန် (4) ကျန်းမာရေးရာ (1) ကျနော့် အကြောင်း (1) ခံစားမှု စာစု (12) ခရီးသွား လမ်းညွှန် (10) စားမယ်/၀ါးမယ် (2) တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု(Live) (1) ဓာတ်ပုံ (7) နည်းပညာ (8) ဘာသာစကား (1) ဘလော့ (ဂ်) ဒေး (5) မြို့ ကျိုင်းတုံ အလှ (1) ရသစာစဉ် (11) ရုပ်ရှင် (6) လက်ဆောင် (6) သတင်း (36) သီချင်း (4) အခမဲ့ ကြော်ငြာ (2) အမှတ်တရ (12) အလှူ Donation (2) အသုံးအဆောင် (1) အတွေးအမြင် (9) တွေ့ရ ၊ကြုံရ (2) ကြေငြာချက် (4) ဘောလုံး ရပ်ဝန်း (5) နှလုံးသားအင်အား (1)
Online မှ ငွေ ရှာရန် Earn Money by Click Ads
ပုံ နှင့် လင့် များပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်၍ မင်ဘာလုပ်နိုင်ပါပြီ.. -------------------------------------------
E-Mail ကနေ ဖတ်ချင်ရင်..ပို့ပေးမယ်..
သင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ ရိုက်ပါ:
မေးလ်မှပို့ခြင်းကို FeedBurnerမှ တာဝန်ယူသည်။
ရွှေမင်းသား ပို့စ်တွေကို Email ကနေရယူမယ်.
ကျနော်ရေးခဲ့သမျှ.. February (1) October (1) August (2) June (1) March (1) February (4) January (2) December (1) November (3) October (1) September (1) October (2) December (1) November (1) October (5) September (3) August (1) July (2) June (5) May (3) April (2) March (2) February (5) January (5) December (3) November (1) October (5) September (6) August (17) July (7) June (5) May (6) April (7) March (4) February (4) January (5) September (25) August (43) July (3)
လားဟူ လူမျိုး ၏ သမိုင်း အကျဉ်းချုပ်
၀ဿန် ,ဟေမာန် ,ဂိမာန်
၁၆ ကြိမ်မြောက် ဘူဆန် နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပြပွဲ (၂ဝ၁၁)
...သွားလည်စရာ Websiteတွေ... ဟန်းဂုရွာ မြန်မာ့သတင်းများ ဖုန်းနဲ့ပါတ်သက်သမျှ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ရဲ့ (စိုင်းစိုင်းအွန်လိုင်း)
မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုအေးဝင်းရေ.. နုနုရည် အင်းဝ။
အားလပ်ရက် အလှူ ကြွရောက်ပါရန်
လစဉ် ဟောစာတမ်း ( မေလ-၂၀၁၃ )
Copyright(မူပိုင်) © 2012 ရွှေမင်းသား. ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်
ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးသူ Free Blogger Templates နှင့် Blogger Teacher - Berita Selebriti - friable vs non-friable asbestos
တို့ပူးပေါင်းပါဝင်၍ Blogger မှ ကူညီပံ့ပိုးသည်။